Itoobiya oo ganafka ku dhufatay shirkii UN-ka ee wadankeeda laga yeeshay.
Saturday December 18, 2021 - 10:56:27
Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka dhacay kulan khaas ah oo ay 'golaha ammaanka' ka yeesheen arrimaha dalka Itoobiya.
Kulankan oo ay dalbadeen inta badan dowladaha midowga Yurub ayaa lagu ansixiyay in khubaro caalami ah loo diro Itoobiya si ay usoo baaraan xasuuqa lagu hayo qowmiyadda Tigreega.
21 dowladood oo ubadan kuwa reergalbeedka ayaa ansixiyay in khubaro baaritaan loo diro Itoobiya, qaar badan oo kamid ah dowladaha qaaradda Afrika ayaa diiday in lameelmariyo xeerkan ka dhanka ah xukuumadda Abiy Axmed.
Shirkii ka dhacay magaalada New York ayaa lagu dhaleeceeyay melleteriga Itoobiya oo la sheegay in uu gabood fallo ka geysanayo gobolka Tigray, dubardiiba xukuumadda Addis Ababa ayaa mucaaradday qaraarka kasoo baxay Q. Midoobay.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa khubarada loo xilsaaray xasuuqa dalkiisa ku sifeeyay marin habaabin iyo faragelin lagu sameyno arrimaha gudaha wadanka.
Kooxaha mucaaradka ah ayaa dhankoosa si diirran usoo dhoweeyay in khubaro baaritaanno sameysa loosoo diro dalka Itoobiya.